नेकपामा जन्मियो नयाँ गुट, कस्को नेतृत्वमा बन्दैछ ?::Hamrodamak.com
नेकपामा जन्मियो नयाँ गुट, कस्को नेतृत्वमा बन्दैछ ?
पार्टीमा बल्झेको विवाद साम्य भएजस्तो देखिए पनि नेपाल र श्रेष्ठले असहमति जनाएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा नयाँ गुटको जन्म भएको समाचार आजको राजधानीले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमजोरी सच्याउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि पार्टीमा बल्झेको विवाद साम्य भएजस्तो देखिए पनि नेपाल र श्रेष्ठले असहमति जनाएका छन् ।